Akụkọ - Hydraulic press
ahịa na Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Yangtze River Delta, Pearl River Delta, nke a na-ejikarị eme ihe na nyocha nke ọkpọkọ dịka ọkpọkọ ígwè na-enweghị atụ, igwe anaghị agba nchara, titanium alloy pipe, ọla kọpa, aluminom. Company'slọ ọrụ anyị kachasị dị mkpa bụ ịmịpụta akụrụngwa hydraulic iji nye akụrụngwa nnwale dị elu ma dị elu iji mejupụta oghere dị n'ahịa ahụ. Enwere ike kewaa hydraulic pịa ụdị akpaka na ụdị aka. Manualdị akwụkwọ ntuziaka nwere ike ịnwale ọkpọkọ anọ n'otu oge, mana ọ chọrọ ọrụ aka. Ọnọdụ, akara, clamping na ịpị bụ akpaka. Enwere ike gbanwee ogologo nke ọkpọkọ site na 2-15m iji gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche na-enweghị atụ.
Aticdị akpaaka: naanị otu tube nwere ike ịnwale n'otu oge. Ọkụ na-akpaghị aka na-abanye na ogbe, na-akpaghị aka na-arụ ọrụ ihe, na-akpaghị aka ụdị, ọnọdụ, vacuumizes, akàrà, clamps na presses niile na-akpaghị aka; akụkụ nke obere ogbe na-akpaghị aka na-egosipụta ngwaahịa ndị nwere ezigbo ntụpọ. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na mmepụta n'ezie. Otu bụ ịchekwa ego, mana ịchekwa ọrụ ma melite ọnụego imepụta ọkpọkọ.
Igwe akụrụngwa nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ka a na-ejikarị na nchọpụta ngwaahịa nke ndị na-emepụta ọkpọkọ, ọ bụkwa nchọpụta dị mkpa na nke dị mkpa na ihe ọkụkụ. Ugbu a ọ na-e ọma mepụtara: akwụkwọ ntuziaka ụdị na akpaka ụdị. Nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie iji kpakọọ!